featuresfour – Purple Feminist Group
HomeBlogPosts Tagged "featuresfour"
Featured Selection – WutYee
Featured Selection – WutYee .
“သမီးရေ…စာသင်မယ့်ကလေးတွေ ရောက်နေပြီနော်” “ဟုတ် အမေ” ကျွန်မလည်း ပြန်ဖြေရင်း နာရီကိုငုံ့ကြည့်လိုက်မိသည်။ “ဟုတ်သားပဲ…သုံးနာရီတောင်ထိုးနေပြီ။ ရုပ်ရှင်ပည့်နေတာနဲ့ သတိမထားမိလိုက်ဘူး” တစ်ယောက်တည်းရေရွတ်ရင်း စာအုပ်နဲ့ မှင်နီတစ်ချောင်းယူပြီး အိမ်ရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။ ကျွန်မသည် စာသင်နေသည်ဆိုသော်လည်း ဆရာမတစ်ယောက်တော့မဟုတ်…တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ဦးသာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ကျောင်းများပိတ်ထားသဖြင့် ကျွန်မတွင်အချိန်ပိုများစွာရှိနေလေသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်အနီးအနားမှကလေးများအား စာပြန်သင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ “မင်္ဂလာပါဆရာမ” ကျွန်မကိုမြင်တော့ ကလေးများသည် သူတို့ပြောနေတာတွေကိုရပ်၍နှုတ်ဆက်ကြသည်။ “မင်္ဂလာပါကွယ်…ဘာအကြောင်းတွေပြောနေကြတာလဲ” “မနေ့က…သားတို့အတူတူကြည့်ခဲ့တဲ့ ကာတွန်းကားအကြောင်းပြောနေတာ ဆရာမ” “ဟုတ်လား…ဘာကားလဲ” “ကား နာမည်က…သေချာတော့မသိတော့ဘူးဆရာမ… ဒါပေမယ့် အဲဒီကားထဲက မင်းသားကအစပိုင်းမှာဝံပုလွေကြီး နောက်ဆုံးမှမင်းသားလေးဖြစ်သွားတာ” “ဪ… Beauty and The Beast လား” “ဟုတ်တယ်…ဟုတ်တယ် ဆရာမ” “ဆရာမရော အဲဒီကားကြည့်ဖူးလား” “ကြည့်ဖူးတာပေါ့…ဆရာမငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကြည့်ဖူးတယ်” “ဆရာမ…သမီးမေးလို့ရလား” “မေးလေ…ဘာမေးမလို့လဲ” “အဲ့ကားမှာလေ…အစပိုင်းမှာ မင်းသမီးလေးက ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကိုစာသင်ပေးတုန်းက လူတေါက ဘာလို့စိတ်ဆိုးကြတာလဲဆရာမ…ပြီးတော့ မင်းသမီးလေးကိုရော လူတွေကထူးဆန်းတဲ့သူလို့ဘာလို့ပြောကြတာလဲ” “အဲဒါကိုပြောပြရင် အကြာကြီးပြောရမှာ…စာမသင်လိုက်ရပဲနေမယ်” “ဆရာမကလဲ ပြောပြပါ… ပြောပြပါ ဆရာမရယ်” အားလုံးကအရမ်းသိချင်နေကြတဲ့ ပုံစံပေါက်နေသောကြောင့် ကျွန်မလဲဒီနေ့စာသင်ဖို့ကိုလက်လျှော့လိုက်သည်။ “ဟုတ်ပါပြီ…အဲဒါဆိုလဲ” “ဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင်လေ ဆရာမတို့မိန်းကလေးတွေမှာ စာသင်ခွင့်မရှိဘူး။ စာလဲဖတ်ခွင့်မရှိဘူး” “အဲဒါဆို ဆရာမ…သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲ” “အဲဒီတုန်းက မိန်းကလေးတွေက အိမ်အလုပ်တွေ၊ ပန်းကန်ဆေးတာတို့ ဟင်းချက်တာတို့ အဲဒါမျိုးတွေလုပ်ကြရတာ။ ပြီးတော့ မိန်းကလေးတွေက ယောကျ်ားလေးတွေလို ပြေးလွှားကစားတာတို့၊ သစ်ပင်ပေါ်တက်တာတို့တွေလည်း လုပ်လို့မရဘူး” “ဟင်း…မတရားလိုက်တာ” “ဟုတ်ပ…မတရားဘူးနော်” ကျွန်မလည်း ရယ်လျှက်ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ “အာ့ဆို…ဆရာမ…သူတို့က စာမသင်ရတော့ ဘာအလုပ်လုပ်ကြလဲ” “အဲဒီတုန်းကမိန်းကလေးတွေက အလုပ်လည်းမလုပ်ရဘူး။ အသက်ကြီးလာရင် မိဘတွေက အိမ်ထောင်ချပေးပြီး တစ်သက်လုံးအိမ်အလုပ်ပဲလုပ်ရတာပေါ့” “တကယ်ကြီးလား…ဆရာမ” “တကယ်ပေါ့…တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ မိန်းကလေးကမဲပေးခွင့်မရှိတာတို့၊ တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်လေ မိန်းကလေးတွေက မီးဖိုချောင်နဲ့အခြားအဝတ်လျှော်တဲ့နေရာပဲသွားခွင့်ရှိတယ်…အိမ်ရဲ့ဧည့်ခန်းတွေထဲတောင်သွားလို့မရဘူး”မိန်းကလေးဖြစ်ရတာမကောင်းလိုက်တာ” ကျွန်မ၏ တပည့်မလေးတစ်ယောက်က ထပြောလေသည်။ ကျွန်မလည်းပြုံးလျှက် “မိန်းကလေးဖြစ်ရတာ မကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ်တော့ မိန်းကလေးတွေကိုသာ ဖိနှိပ်ထားတဲ့ လူတွေ၊ စနစ်တွေကသာ မကောင်းတာပါသမီးရဲ့” ကျွန်မအဲလိုပြောလိုက်မှ တပည့်မလေးမျက်နှာပြန်လည်ဝင်းပသွားလေသည်။ “ဆရာမ အဲဒါဆို သမီးတို့ကအခု ဘာလို့စာသင်လို့ရနေတာလဲ၊ မေမေဆိုလဲ အလုပ်လုပ်နေတာပဲ” “ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆရာမတို့အရှေ့ကအာဂမိန်းကလေးတွေ၊ အမျိုးသမီးကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ အသက်တွေရင်းပြီး မတရားမှုတွေကို တော်လှန်ပေးခဲ့ကြလို့ပေါ့… အဲ့ဒါအပြင် လူတွေရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှုတွေ၊ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဖိနှိပ်မှဒတွေ၊ လူတွေရဲ့ အထင်သေးမှုတွေ အများကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း မိန်းကလေးတွေရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ခေတ်အဆက်ဆက်တောင်းဆိုလာလိုက်တာ အခုလိုမျိုး ဆရာမတို့တွေ အေးအေးဆေးဆေး စာသင်နေနိုင်တဲ့အထိပေါ့” “အဲဒါဆို ဆရာမ သမီးလည်း ကြီးလာရင် သူတို့လို အမျိုးသမီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး အကျင့်မကောင်းတဲ့သူတွေကို ဆုံးမရမယ်” ကျွန်မတပည့်မလေးက ဆုံးဖြတ်ချက်အပြည့်အဝချပြိးတဲ့ မျက်နှာလေးနှင့်ကျွန်မကိုထိုသို့ပြောလာသောကြောင့် ကျွန်မလဲ ရယ်လိုက်မိသည်။ ချစ်စရာကောင်းသော ကျွန်မ၏တပည့်မလေးလို အနာဂါတ်မှာ တောက်ပလာမယ့်လူငယ်လေးများအတွက် ကျွန်မလည်း အများကြီးကြိုးစားရအုန်းမည်။ မတရားမှုတွေကိုတော်လှန်နေရပါဦးမည်။ ညစာစားပြီးစာလုပ်ရန်စာကြည့်စားပွဲသို့ ထိုင်မိချိန် စားပွဲပေါ်တွင်ထပ်ထားသော စာအုပ်များဆီသို့မျက်စိရောက်သွားသည်။ တစ်အုပ်မှာ ဆရာလင်္ကာရည်ကျော်၏ “ပန်းမာန်” ၊ ကျန်တစ်အုပ်မှာ အစ်မခင်နှင်းကြည်သာ၏ “ချစ်တဲ့သူကိုသတိရတဲ့အခါ”။ ဘာရယ်မဟုတ် နှစ်အုပ်တွဲမြင်လိုက်တော့ပြုံးမိလိုက်သည်။ ပန်းမာန်စာအုပ်ထဲက ခင်နွယ်စိုးလို၊ အပြင်လက်တွေ့ဘဝက အမ ခင်နှင်းကြည်သာတို့လို၊ ထို့ပြင်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးအများအတွက် လုပ်ပေးနေကျတဲ့အမျိုးသမီးများအကြောင်းတွေးမိတော့ အလိုလိုပီတိဖြစ်လာမိသည်။ ထိုအမျိုးသမီးလေးများသည် မိန်းကလေးတွေက နုနယ်တယ်၊ ပျော့ညံ့တယ် စသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကသတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများကို ပျက်ရယ်ပြုခဲ့ကြသည့် စံထားစရာကောင်းသော အမျိုးသမီးလေးများဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ ကျွန်မအတွေးနယ်ချဲ့နေချိန်တွင် ကျွန်မ၏ဖုန်းသံမြည်လာသည်။ “ဟယ်လို” “ဟယ်လို” တစ်ဖက်မှ ကျွန်မသူငယ်ချင်းချင်း၏ ပြန်ထူးသံကို ကြားရသည်။ “အေး….ခုနက ဖုန်းဆက်ထားတာတွေ့လို့” “ဪ…..ဘာမှတော့ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူး။ ပျင်းတာနဲ့ စကားပြောရအောင် ဖုန်းဆက်လိုက်တာ၊ ခုန ဘာလုပ်နေတာလဲ ဖုန်းမကိုင်ပဲ” “အေးဟာ…ပန်းကန်ဆေးနေတာနဲ့ ဖုန်းသံမကြားလိုက်ဘူး” “ဪ…ငါက စာလုပ်နေတယ် ထင်နေတာ” “စာလုပ်နေတာပါဟာ… အမှန်က…အမေက ပန်းကန်လာဆေးဆိုတာနဲ့ ဆေးနေတာ” “နင်က စာလုပ်နေတာကို နင့်အကိုတွေက ဘာလုပ်နေလို့လဲ သူတို့ကိုမခိုင်းဘူးလား” “ဂိမ်းဆော့နေကြတယ်။ ငါလည်း လုပ်ခိုင်းဖို့ပြောတာပဲ။ အဲ့ဒါကို ငါ့အမေက မိန်းကလေးအလုပ်တွေကို ဘာလို့လုပ်ခိုင်းရမှာလဲတဲ့၊ ငါလည်း ရှင်းပြနေရတာများတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး” “အဲ့ဒါဆို နင့်အကိုကို နင်ကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်လေ” “ပြောတာပဲ… သူကလည်းငယ်ငယ်ကတည်းက ဒီလိုပဲနေလာတာဆိုတော့ မိန်းကလေးအလုပ်တွေ ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲပဲ ပြန်ပြောတယ်” “အေးနော်… မိဘတွေကိုယ်တိုင်က အဲ့လိုဆိုတော့ ငါတို့လည်းဘာမှပြောလို့မရဘူး။ ထားပါ တခြားအကြောင်းပြောမယ်” “သြော… ဒါနဲ့ နင် − ပေါ်က ဆရာဝန်မလေးအကြောင်း တွေ့လိုက်သေးလား” ကျွန်မ ခဏ ပြန်စဥ်းစားလိုက်ပြီးမှ “ဪ…တွေ့လိုက်တယ်၊ အလုပ်ကထွက်ပြီး နယ်ဘက်တွေမှာ လိုအပ်တဲ့သူတွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ အမ မလား” “အင်း…ဟုတ်တယ် လေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်။ အခုလိုအခြေအနေမျိူးတွေမှာ အာဏာရှင်တွေကို တော်လှန်ရင်း အများအတွက်ပါ လုပ်ပေးနေနိုင်တာ” “ဟုတ်ပ…ပြီးတော့ အမ ကြယ်စင်တို့လို မိန်းကလေးတွေကလဲ အသက်နဲ့ရင်းပြီး တော်လှန်ခဲ့ကြတယ်။ ခုလည်း တော်လှန်နေကြတုန်းပါပဲ” “အင်း…ဟုတ်တယ်။ ဆန္ဒပြတော့လည်း မိန်းကလေးတွေအများကြီး ထွက်လာကြတယ်။ ပြီးတော့ ဒိုင်းကိုင်ပြီး ရှေ့တန်းက ကာကွယ်တော့လည်း မိန်းကလေးတွေပါတာပဲ။ ငါတို့ မိန်းကလေးတွေ အရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပဲ မတရားတာတွေကို ရဲရဲဝင့်ဝင့်တော်လှန်နေပြီ၊ နောက်ထပ်လည်းပိုတော်လှန်နေကြဦးမှာပဲ” “ငါတို့ရောပဲပေါ့” ထိုသို့ပြောပြီး ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်တူရယ်လိုက်မိသည်။ “ကျန်တာ နောက်မှဆက်ပြောရအောင် ငါ့အမေခေါ်နေလို့” “အင်း…အင်း…. အာ့ဆိုဒါပဲနော်” တစ်ဖက်မှ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ဖုန်းချသွားသည်။ ကျွန်မလည်း အတွေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့ပြန်တယ်။ “ယောကျ်ားကြီးဖြစ်ပြီး ဘာလို့ငိုနေတာလဲ မိန်းမလိုမိန်းမရနဲ့” “မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး ပြောတာဆိုတာ နေတာထိုင်တာ ကြမ်းတမ်းလိုက်တာ” “မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး အိမ်အလုပ်လေးတောင်မလုပ်တတ်ဘူး” “အိမ်က အကြီးကောင်ကတော့ ဉာဏ်ပြေးတယ်၊ သမီးအငယ်လေးကတော့ မိန်းကလေးမို့လို့ထင်တယ် ဉာဏ်သိပ်မကောင်းဘူး”၊ “မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းမရှိဘူး”၊ “စကားကို ကပ်သပ်ပြီး ပြောနေလိုက်တာ မိန်းမကြီးကျနေတာပဲ” ထိုသို့သောစကားများကို မိန်းကလေးများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ အမေများ ကိုယ်တိုင်သုံးနှုန်းပြောဆိုနေကြသည်ကို တွေ့ရတာ ကျွန်မဝမ်းနည်းမိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို အပြစ်မဆိုရက်ပါ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုသို့ပြောဆိုခံရပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာပင်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုအပြစ်မဆိုရက်ပါ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ထို့သို့ပြောဆိုခံရပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မတို့တွေဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မမျှတတဲ့စံနှုန်းတွေ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဖန်တီးထားတဲ့ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ စနစ်တွေအတွက် မွေးဖွားလာရခြင်း မဟုတ်တာကို မိန်းကလေးတိုင်း၊ လူသားတိုင်းကို သဘောပေါက်စေချင်မိတယ်။ အဲ့လို လူတိုင်းသဘောပေါက်အောင်လည်း ကျွန်မတို့တွေက အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရင်း၊ မတရားမှုတွေကို အတူတူတွန်းလှန်ကြရင်း ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအတွက် အခွင့်အရေးတွေအတွက် အမြဲကြိုးစားနေကြမှာပါ။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်းက တရားမမျှတမှုများကို အမြဲတွန်းလှန်ရင်း ရှင်သန်နေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ စာရေးသူ − ဝတ်ရည်
Featured Selection – “Giselle Mae” .
သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာ ရဲရဲနီနေခဲ့တယ်။ သူက အပြင်သွားတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းနီကို ရဲနေအောင် ဆိုးရမှ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ကိုရီးယားကားတွေထဲက နှုတ်ခမ်းနီရဲရဲနဲ့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကလေးစီးထားတဲ့ CEO မမတွေလိုပေါ့။ “အမလေး…ခုလောလောဆယ်ကတော့ နေ့စားခတောင်တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ရဖို့အရေး ခင်မို့မို့အေး လုပ်နေရတယ်” လို့လဲ သူကမဲ့ရွဲ့ပြီး ရေရွတ်တတ်တယ်။ အရွယ်ကောင်းတုန်း ပညာလေး တတ်ချင်လို့ ပိုက်ဆံလေး စုထားပြီး သင်တန်းတက်မယ် စဥ်းစားတော့လည်း သူ့မှာ အချိန်က မရှိပြန်ဘူး။ညနေစောင်းမှ အလုပ်ဆင်းရတော့ သူ့မှာ ပင်ပန်းတာရယ်… ဒီနိုင်ငံမှာက မှောင်ရင် မိန်းကလေး အပြင်ထွက်ဖို့ရာစိတ်မချရတာနဲ့တင် အဆောင်ကလွဲလို့ ဘယ်မှမသွားဖြစ်ပြန်ဘူး။ ညနေမှတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှတင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်မချရတာပါပဲ။ သူ့ကို သူ့အထက်လူကြီးတစ်ယောက်က ပွတ်သီးပွတ်သပ်လာလုပ်တုန်းကဆို နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး။ ညနေကျ သူနဲ့အတူတူလိုက်ခဲ့ဖို့ ဆိုလား၊ သူ ရှက်လွန်းလို့ ကောင်းကောင်း မမှတ်မိပါဘူး။ လန့်ပြီး အော်လိုက်မိတော့ ခဏနေကျ သူအဆူအဆဲခံရတယ်။ အဲ့ဒီတော့လည်း ဒီအလုပ်ကလေး မပြုတ်ဖို့အရေး သူ့ကို စော်ကားတဲ့ သူကိုပဲ ပြန်တောင်းပန်ရပြန်ရော။ ဘယ်သွားတိုင်လို့ရမလဲ…သူမှမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်အိမ်ထဲ အရိုးကွဲအောင် အရိုက်ခံရတဲ့ သူတွေတောင်… သွေးတောက်တောက်ကျအောင် အစော်ကားခံရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ တောင် ညှိနှိုင်းပေးတာနဲ့၊ ငွေလေး နည်းနည်းပေးတာလောက်နဲ့ ပြီးလိုက်ကြရတာပဲ မဟုတ်လား။ ကိုဗစ်တွေ ဖြစ်တုန်းကဆို အလုပ်အကိုင်တွေက ပိုကြပ်လာတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းထဲက တချို့ဆို ခန္ဓာကိုယ် ရင်းရတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ကြရတယ်။ ရဲတွေက ဂွင်ဖန်တာနဲ့၊ လူတွေက အနိုင်ကျင့်ချင်ရတာနဲ့… “ဒါကြီး မလုပ်ပါနဲ့လားဟယ်” လို့ သူကပြောတော့ “ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ၊ တခြားရွေးစရာမှ မရှိတာ” တဲ့။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် ကြိုးစားစရာလမ်း၊ တက်လမ်း ဘယ်မှ များများစားစား ရှိလို့လဲ။ အလုပ်သမားတွေကစလို့ ဟိုးနိုင်ငံရေးသမားတွေ အဆုံး… မိန်းကလေးတွေ အတွက် ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားမယ့် လမ်းကြောင်းမှာ အကန့်အသတ်တွေ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ရှိနေတာပဲ။ ဟော… ယုတ်စွအဆုံး ယောကျာ်းယူတာက အစ ဘာသာခြားရင် ယူမရတာနဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဖြစ်ရင် ကလေးက ဘယ်နှယောက်ပဲ ယူရမယ်ဆိုတာနဲ့။ အစကတည်းက စည်းတွေ ဘောင်တွေ ကန့်သတ်ချက်တွေ များရတဲ့ကြားထဲ စစ်အာဏာသိမ်းတာက ကြုံရပြန်တော့ သူလည်း လမ်းပေါ်ထွက်ဖို့ ဖြစ်လာတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ပြောသလိုပေါ့… “တစ်ခြားရွေးချယ်စရာမှ မရှိတာ” လေ။ လမ်းမတွေပေါ်မှာ မိန်းကလေးတွေ မကြောက်မရွံ့ အများကြီး ထွက်လာကြတာ တွေ့တော့ သူအားတက်မိတယ်။ တချို့ဆို ဟိုးရှေ့က ဦးဆောင်ပြီး ချီတက်ကြ၊ အလံတွေ ကိုင်မြှောက်ကြ၊ ကြွေးကြော်ကြနဲ့။ ကျည်ဆန်မိုးတွေ ရွာတဲ့နေ့တွေမှာတောင် မီးခိုးလုံးတွေကြားထဲ… ထမီတန်းတွေကြားထဲမှာ စိတ်တူကိုယ်တူတွေနဲ့ သူဟာ နောက်မဆုတ်ပဲ ဆက်တိုက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲ သူဟာ လူ့ငရဲလို့ ခေါ်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ရောက်ဖူးသွားခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ ရောက်ရောက်ချင်း “ ဒီနေရာမှာ ငါ့လို မိန်းကလေးတွေ များစွာ ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတယ်” လို့တွေးမိတော့ သူ့ကျောရိုးထဲ လျှပ်စီးတစ်ခု ဆစ်ခနဲ ဖြတ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ “ဒါပေမဲ့ ဒီထဲမှာ စွန်းခဲ့ရတဲ့သွေးတွေ၊ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ အသက်တွေ အတွက် အခုထိ ဘာတရားမျှတမှုမှ မရသေးဘူးပဲလို့ ထပ်တွေးမိပြန်တော့ သူ့စိတ်ထဲ ထောင်းခနဲ ဒေါသထွက်ရပြန်တယ်။ ဒီနေရာကျဥ်းကျဥ်းလေး တစ်ခုမှာမှ မဟုတ်ဘူး…တစ်နိုင်ငံလုံးက အကျဥ်းစခန်းတွေထဲမှာ လူမျိုးစုပေါင်းစုံရဲ့ ဒေသတွေမှာ… ငါတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ… ကျောင်းတွေမှာ… နောက်ဆုံး ငါတို့အိမ်တွေထဲမှာ… ငါတို့တွေ စွန်းခဲ့ရတဲ့ သွေးတွေ၊ သေရာပါ ကျန်နေခဲ့မယ့် ဒဏ်ရာတွေ၊ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ အသက်တွေ.. ဒါတွေအတွက် တရားမျှတမှု ဘာမှ မရသေးဘူး။ ငါတို့ ဒီလိုတွေ အနှိပ်စက်မခံရမဖို့… အနှိမ့်ချမခံရဖို့အတွက် ကာကွယ်ပေးမယ့် အာမခံချက်တွေ ဘာဆိုဘာမှ မရှိသေးဘူးပဲ။” ဒီအတွေးတွေ၀င်လာတော့ သူပို နာကြည်းလာတယ်။ ပိုခံပြင်းလာတယ်။ ဒီထဲက ညီတွေညီမတွေရဲ့ သွေးစက်တွေက နံရံပေါ်ကနေ နီစွေးစွေး ပြန်အရာထင်လာတယ်။ အပြင်ဘက်က ညီအစ်မတွေရဲ့ အော်ဟစ်သံတွေ၊ ငိုကြွေးသံတွေ ဆူညံလာတယ်။ “ဒီနေရာက လူတစ်စုတည်းကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုလုံးကြောင့်။ သူတို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖျက်စီးခဲ့တဲ့ ဒီလူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့်.. သူတို့ ရိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ အယူ၀ါဒတွေကြောင့် ငါတို့အတွက် တက်လမ်းတွေ၊ ငါတို့အတွက် အာမခံချက်၊ ငါတို့အတွက် တန်းတူညီမျှမှု၊ ငါတို့အတွက် တရားမျှတမှုတွေ အကုန် ဆုံးရှုံးနေရတာ။ ဒါတွေကို ငါတို့ကိုယ်တိုင် တိုက်ယူရမယ်။ ငါတို့ ဘာမှ ရှက်ရွံ့နေစရာ၊ နောက်ဆုတ်စရာ မရှိဘူး။” ဒီလိုနဲ့ပဲ သူ ရဲရင့်ခဲ့တယ်။ သူ မာကြောခဲ့တယ်။ သူခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့တယ်။ ရင်ထဲက နာကျင်မှုတွေနဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ထုံနေခဲ့သလို… အကြောက်တရားနဲ့ အတူတူ ရှိနေတဲ့ နာကြည်းမှုက သူ့ကို ဆက်ရုန်းကန်ဖို့ အင်အားတွေ ပေးနေခဲ့သလို… သူက ငရဲစခန်းထဲက စက္ကန့်တိုင်းမှာ သူ့စိတ်ဓါတ်တွေ ပြိုလဲမသွားအောင် တောင့်ခံနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေဟာလည်း ရဲရဲနီလို့ပါပဲ။ စာရေးသူ − Giselle Mae
Featured Selection – “Moe-z May”
ဆယ်စုနှစ်များ၊ ဖြတ်သန်းပြီကား ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်၊
ခါးဆီးကြုံလို့ မျှော်ခဲ့ဒီမို၊ ခရီးရှည်ကို။
ကျား မ တန်းတူ၊ အခွင့်ဟူကို
း တို့များတူညီ၊ ဒဏ်ရာကိုယ်စီနှင့်
ညီမျှဝါဒ၊ ထူထောင်ကြဖို့ တို့များတော်လှန်၊
အမိန့်ဖီဆန်လို့ အာဏာရှင်ဝါဒ၊ ကျဆုံးကြစေ။
စာရေးသူ − Moe-z May
Featured Selection − Aung
“ အာဏာရှင်ကိုဖီဆန်ကြသော မြန်မာအမျိုးသမီးများ “ ငါက သူတို့နဲ့မတူဘူး။ ငါကသာမန်မိန်းမမဟုတ်ဘူး။ ငါကအခြားမိန်းကလေးတွေလိုမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့စကားတွေ။ သူတို့ကရောဘယ်သူလဲ? ငါကရောဘယ်သူလဲ? . အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ တော်တော်တာသွားတဲ့ စကားတစ်ခုနဲ့တင် လူမှုဘဝတွေကွာခြားသွားတယ်။ ဆင်းရဲချမ်းသာမှုကွာခြားချက်တွေမြင့်တက်လို့၊ အခွင့်အရေးရလို့၊ လူကိုလူလိုဆက်ဆံခံရလို့၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်သွား၊ အိမ်မက်တွေနောက်လိုက်နိုင်ကြတာက ဆန်းသလား။ “စာအုပ်တွေသာမရှိရင်၊ ဒီအတွေ့အကြုံကိုမျှဝေပေးတဲ့သူတွေသာမရှိရင်၊ ဒီအရာတွေကိုဖတ်ဖို့ စိတ်မဝင်စားမိခဲ့ရင် ကျွန်မက ကျွန်မဘဝကိုပဲအာရုံစိုက်မိပြီး ကျန်တာတွေကို ဥပေက္ခာပြုမိနေမှာ” လို့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဝန်ခံဖူးတယ်။ ကျွန်မကရော…. . နန်းဟာဗီးကို ရန်ကုန်ဗဆွေ ရေးခဲ့လို့ သိခဲ့တယ်။ ဒီလိုယဥ်ကျေးမှုတွေ ဖုံးကွယ်ထားပေးတဲ့အာဏာရှင်ဆန်မှုတွေ၊ ဖိုဝါဒီကြီးစိုးမှုတွေကို ကျွန်မတကယ်မသိခဲ့တာအမှန်ပါ။ မြို့ပြမှာနေတဲ့ သာမန်အလတ်တန်းစားလူငယ်ပီပီ ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးကိုပဲ ကြည့်ခဲ့တယ်။ ကြည့်နိုင်ခဲ့တယ်။ မြို့ပြက ကျေးလက်ထက်ပိုခေတ်မီတယ်၊ ပိုပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကြားမှာ နစ်မြုပ်ရင်း ဒီလူမှုအသိုက်အဝန်းအတွက် ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျေးလက်တွေကို ပိုကောင်းလာအောင်၊ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေတိုးတက်လာအောင် အာရုံမစိုက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အို… ကျေးလက်ဒေသမပြောနဲ့ ရန်ကုန်စက်ရုံက အလုပ်သမတွေရဲ့ ဘဝကိုတောင် ကျွန်မတလောကမှနားလည်ခဲ့တာ။ အရင်းရှင်စနစ်ကြီးကြောင့်ပဲ ကျေးလက်ဒေသမှာ မသေရုံစား၊ ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ပြီး စျေးနှိမ်ခံရတဲ့တောင်သူတွေ၊ ကောက်စိုက်သူတွေဟာ မြို့ပြကို တိုးတက်လိုတိုးတက်ငြား တက်လာကြတယ်။ အခန်းငယ်လေး အဆောင်ငယ်လေးထဲခိုဝင်နားရင်း နေ့တွက်စာလေးရဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်နိုင်ကြပါ့မလား။ အာဟာရပြည့်အောင်စားနိုင်ပါ့မလား။ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ အနာဂါတ်တိုးတက်ဖို့အတွက်ရော တွေးနိုင်ပါ့မလား။ ချမ်းသာပြီးသားသူတွေ အရင်းအနှီးစိုက်ထုတ်ပြီး ပိုချမ်းသာလာဖို့အတွက် အလုပ်သမတွေ ဘာအကျိုးအမြတ်ရခဲ့လဲ။ ကျေးလက်ဒေသ၊ တောင်ပေါ်ဒေသမှာကျန်နေခဲ့သူ အမျိုးသမီးလေးတွေ၊ အမျိုးသမီးကြီးတွေကရော ဒီခေတ်စနစ်ကို မွေးခွန်းထုတ်မိကြရဲ့လား။ သြော….မေးခွန်းထုတ်ရဲကြပါ့မလား။ . လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုတွေထဲ ကရင်တွေပြေးရင်း သံလွင်မြစ်ကိုဖြတ်ကျော်ရတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်း မွန်းကြပ်လာလိုက်၊ သတ္တိတွေရှိလိုက်နဲ့။ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းထဲ အသက်ရှင်ရတာကံကောင်းပါတယ်တဲ့။ မိသားစုတွေ၊ အမျိုးအနွယ်တွေ အကြောင့်မဲ့သတ်ဖြတ်ခံရတာကိုကြည့်ရင်း ရခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ဘယ်သူတွေကုစားပေးမှာလဲ။ ဘယ်သူတွေတာဝန်ယူပေးကြမလဲ၊ . အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာရှိပေမယ့် အကျိုးကိုမကြည့်နိုင်ကြပဲ အကြောင်းကောင်းဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအများကြီး။ ပြည့်တန်ဆာတွေက ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်။ ဘာလုပ်သင့်တယ်။ ဘာလုပ်ပေးရမယ်လို့ ရေပေါ်ဆီအသိုင်းအဝိုင်းက အော်ပြောနေကြပေမယ့် လက်တွေ့ဘဝကိုပဲဝင်ကြည့်ပေးဖို့၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာနားလည်ပေးဖို့၊ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတာကိုစဥ်းစားပေးဖို့ တကယ်လိုအပ်တာ။ . အိမ်နောက်ဖေးတိုက်ခန်းက အန်တီကြီးရဲ့ ပြန်အော်သံကို ကြားနေရတယ် “ကျွန်မဆက်မပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။ ဒါအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနော်။ ကျွန်မဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး၊ မလုပ်ဘူးလို့ထင်မနေနဲ့။ ကွာရှင်းမယ်၊ တရားရုံးမှာဆက်တွေ့ကြမယ်” တဲ့။ သားသမီးတွေ စိတ်ဒဏ်ရာရမှာကိုတွေးပေးရင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ပေးတဲ့ဖိအားတွေ၊ မေးမယ့်မေးခွန်းတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီနဲ့တူတယ်။ အပျိုဖြစ်မှု၊ ဘုန်းတန်ခိုးနိမ့်ကျမှုဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ဘယ်ကဘယ်လိုစခဲ့လည်းဆိုတာ သေချာမသိသလို၊ သိသလောက်တော်လှန်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ခေါင်းငုံ့မခံချင်၊ ခေါင်းငုံ့မခံနိုင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိလာခဲ့ရတယ်။ . အဲ့ဒီနေ့က ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ(၄)ရက်နေ့ပေါ့…. အမျိုးသမီးထုကြီးက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့အတူချီတက်လာတယ်။ အာဏာရှင်ကိုအလိုမရှိကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်လို့။ အမျိုးသမီးထုရဲ့သတ္တိတွေပေါ့။ ဆရာမတွေ စီဒီအမ်ပါဝင်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေသံပုံးတီးကြတယ်။ အားလုံး အားလုံး အားမာန်အပြည့်နဲ့ပါပဲ။ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ ကောင်းမှမကောင်းတာ။ အထူးသဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်။ အရင်းရှင်တွေကိုပဲ အကျိုးအမြတ်ပေးပြီး လက်ဝါးကြီးအုပ်တဲ့စနစ်။ လက်နက်အားကိုးနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေပေါ့။ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပိုမိုနားလည်ရမယ်။ ဥပက္ခာပြုခဲ့တာတွေအတွက်ဖိနှိပ်ခံလူတွေကိုတောင်းပန်ရမယ်။ ကတိတည်ရမယ်။ ကိုယ်ရယူထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို အခွင့်အရေးတွေပါလို့နားလည်ပြီး မာန်မကြွပဲ၊ ခေါင်းပုံမဖြတ်ပဲ၊ လူသားချင်းစာနာနိုင်ရင်၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လူတွေကပဲ အပြည့်အဝပေးနိုင်ရင်၊ တန်းတူညီမျှမှုကို ဦးစားပေးမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့အိမ်မက်တွေဖြစ်လာနိုင်မှာပါ….ဖြစ်လာမှာပါ။ အောင်